Jose Mourinho oo ku digtay Arsenal iyo Arsene Wenger mar kale
Friday, June 22nd, 2018 - 15:44:40
Monday September 11, 2017 - 11:22:33 in Wararka by Kubad Bile
Mourinho iyo Wenger ayaa isku dhacay wax badan 12 sano ee tagay ayadoo uu macalinkii hore ee Chelsea uu tilmaamay Wenger mid guuldarada caadeestay.
Piers Morgan oo ah taageere Arsenal isla markaasna ah Wariye caan ah oo CNN ka howl gali jiray hataana ah qoraa u shaqeeyo majalada Daily Mail ayaa qarsan sida uu u doonaayo in Arsene laga ceeriya Arsenal.
Dhawaan ayuu la kulmay macalinka Man United asiga oo ku soo qoray bartiisa mareegta Twitter-ka "Waxaan rajeeyn lahaa inaa sawirkaan kula galaa adiga oo macalinka Arsenal ah".
Morgan ayaa Daily Mail ku qoray Sheeko asi iyo Jose dhax martay Jose ayaa dhahay "Waxaan ka xumahay sida ay Arsenal taageerayaasheeda yihiin waxaan leeyahay waa ka xumahay sidaa tihiin hada".
"Waxaan leeyahay saaxiibo badan oo Arsenal taageeraan sidaa adiga u jeceshahay oo kale u jecel , waxaana wada haleelay cudurka Carada ka dhasho ee Depresserka loo yaqaano aad ayay ula dhibaatoodeen, waa wax xun".
Morgan waxaan weeydiiye Jose "Sidee baas ayuu wali Arsenal u maamulaa Arsene Wenger?" Ma ogi aniga mana la socdo taas ayuu Jose yiri balse waxaan rajeeynaa inuu muddo badan sii joogaa Arsenal.
Kooxda Jose ayaa Hogaanka horyaalka heeyso ayagoo leh 10 dhibcood 4 kulan ee ciyaareen. Balse Wenger ayaa sheegay inuu iska diiday inuu Manchester United macalin u noqdaa maadama uu Arsenal jeceylka uu u qabo uu aad u baaxad weyn yahay.